နား နှင့်ပတ်သက်သော အိမ်တွင်း ဆေးနည်းတိုလေးများ - Latest Myanmar News
နားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြုလုပ်သင့်သော အရာများ
နားတွေမှာ သူ့ဖာသာသန့်စင်စေခြင်းနဲ့ သူ့ဖာသာ ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘာဝသတ္တိရှိပြီးသားပါ။
နားဖာချေးက သဘာဝအရ နားကို စွတ်စိုပေးသောအရာဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် နားတွေကို မမှန်ကန်တဲ့နည်းတွေနဲ့ သန့်ရှင်းဆေးကြောမူ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ နားမှာထိခိုက် ဒါဏ်ရာ ရခြင်းနဲ့ နားတွင်းကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
( ၁ ) အားတိုင်းနားမကလော်ပါနဲ့
နားဖာချေးတွေဟာ နားနဲ့သူ့ဖာသာ သန့်စင်စေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကောင်းကောင်းအလုပ် လုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် နားဖာချေးတွေဟာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပိတ်ဆို့မနေရင် ကလော်ပြီး မဖယ်ရှားသင့်ပါဘူး။
အပြင်နားစည်အရေပြားရှိ ဂလင်းကနေ ထုတ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ နားဖာချေးတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
နားစည်ရဲ့ အရေပြားကို ကာကွယ်ဖုံးအုပ်ပေးခြင်း ရေကိုတွန်းထုတ်ခြင်းနဲ့ နားတွင်းပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်း စသည်လုပ်ငန်းတွေအပြင်နားအတွင်း အရေပြား ခြောက်သွေ့ယားယံခြင်း မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ဒါ့ပြင် နားဖာချေးဟာ ဖုန်နဲ့ပိုးမွှားတွေကို နားစည်ထဲမရောက်အောင် သယ်ယူထားပေးပါတယ်၊ အများအားဖြင့် နားဖားချေးဟာ သူ့အလိုလို ထွက်သွားလေ့ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်
တချို့လူတွေမှာတော့ အလိုလို ထွက်မသွားတဲ့အတွက် နားဖာချေးကို ကလော်ပြီးဖယ်ထုတ်ရတတ်ပါတယ်။
( ၂ ) နားစည်ထဲဘာမှမထည့်ပါနဲ့
နားအတွင်းထဲကို ဝါဂွမ်းစ ကလစ်လို ချွန်တက်တဲ့ အရာတွေမထည့်ပါနဲ့ နားအတွင်းထဲပြင်ပပစ္စည်းထည့်တာဟာ နားစည်ရဲ့နူးညံ့တဲ့ အရေပြားကို ထိခိုက်ပျက်ဆီးစေသလိုအခန့်မသင့်ရင် နားစည်ကို ပေါက်ပြဲစေပါတယ်။
လူအများစုဟာ နားဖာချေးထွက်သွားအောင် နားထဲကိုပြင်ပပစ္စည်းထည့်ပြီး ကလော်ထုတ်တတ်ကြပါတယ် နားဖာချေး သိပ်မရှိပဲ ပြင်ပပစ္စည်းဟာ နားစည်အထိရောက်သွား
ရင် နားကို မသက်မသာဖြစ်စေကာ ယာယီနားမကြားတော့တာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
နားစည်အရေပြား ခြစ်မိခြင်းနဲ့ နားဖာချေးဟာ နားစည်အတွင်းထဲထိ ရောက်ရှိသွားခြင်းတွေကြောင့် နားတွင်းကူးစက်ပိုးဝင်တဲ့ အန္တရာယ်လည်းများပါတယ်။
( ၃ ) နားအတွင်းထဲမဆေးကြောပါနဲ့
နားတွင်းအပြင်ဖက်ပိုင်းညစ်ပတ်နေရင် ဆပ်ပြာနဲ့ရေစိုစွတ်နေတဲ့အဝတ်နဲ့ အဝတ်စသုံးပြီး ဆေးကြောပေးပါ။ နားအတွင်းထဲကိုတော့ အဝတ်စ လက်ချောင်းနဲ့ တခြားဘာမှထည့်ပြီးတော့မဆေးကြောပါနဲ့။
ကလေးရဲ့နားကို ဆေးကြောသန့်စင်ဆေးပေးချ င်ရင်လည်း ဝါဂွမ်းစကို ဆပ်ပြာမပါတဲ့ရေထဲထည့်ပြီး ဆေးကြောပေးလို့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ နားကို ခြောက်သွေ့အောင်ပြန်ပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ရေကူးတဲ့သူတွေမှာ နားခြောက်သွေ့အောင်အထူးဂရုစိုက်ဖို့လို့ပါတယ် အငယ်၍ နားတွင်ပိုးဝင်ပြီး နာကျင်နေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြပါ။
( ၄ ) နားထဲက ပြင်ပပစ္စည်းကို အတင်းမဖယ်ရှားပါနဲ့
လူကြီးတွေရောကလေးတွေပါနားထဲ ပြင်ပပစ္စည်းဝင်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာတော့ မတော်တဆ နားကပ်ကျွတ်ပြီး နားထဲဝင်သွားတာဖြစ်တတ်ပြီး ကလေးတွေကတော့စချင်နှောက်ချင်စိတ် စပ်စုလိုစိတ်နဲ့ အခြားကလေးရဲ့နားထဲ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်နားထဲပြင်ပပစ္စည်းထည့်တတ်ကြပါတယ်။
ပဲစေ့လို ခဲဖျက်လိုပစ္စည်းတွေဆိုရင် သူ့အလိုလို ပြန်ထွက်သွားဖို့ မလွယ်ပါဘူးအင်းဆက်ပိုးမွှားတွေလဲ နားထဲရောက်ပြီးပိတ်မိနေတာမျိုး ရှိပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ
ကိုယ့်ဖာသာပြင်ပပစ္စည်းကို ဖယ်ရှားဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ဆရာဝန်ထံ ချက်ခြင်းသွားပါ။
ဆရာဝန်က နားထဲက ပြင်ပပစ္စည်းကို အထူးကိရိယာနဲ့ ဖယ်ရှားပေးမယ့်အပြင် နားထဲမှာ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရှိ မရှိ ဆန်းစစ်ကြည့်ရူကာ လိုအပ်သလို ကုသပေးပါလိမ့်မည်
( ၅ ) နားထဲနားဖားချေးအလွန်အကျွံပိတ်ဆို့နေခြင်း
နားထဲနားဖာချေးအလွန်အမင်းပိတ်ဆို့ နေပြီး ဖယ်ရှားဖို့လိုတယ့်အခြေအနေတွေရှိပါတယ် ဖယ်ရှားဖို့လိုတယ့် လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ နား အကြားအာရုံ ဆုံးရူံးခြင်း
နားကိုက်ခြင်း နားအူခြင်း နားထဲပြည့်နေသလို ခံစားရခြင်း စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
( ၆ ) ဝါဂွမ်းတံဖြင့်နားကလော်ခြင်းဆိုးကျိုး
ဝါဂွမ်းတံကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသံအိုးလို့ခေါ်တဲ့ ( Eardrum ) ထိခိုက်နိုင်ပြီးမကြာခဏ နားကိုက်တာ နားယောင်ရမ်းတာ အနာဖြစ်ပြီး ပြည်တည်တဲ့ အပြင် အဆိုးဆုံး နားကန်းတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခဏခဏနားကလော်ခြင်းကိုမလုပ်ပါနဲ့အသံအိုးကိုထိခိုက်စေအကြားအာရုံကိုထိခိုက်စေနားကိုက်တာ နားယောင်ယမ်းတာ နားအနာကြောင့်ပြည်တည်တာဖြစ်စေတယ်
ဆေးပညာရှင်များက ခဏခဏနားကလောစရာမလိုပါကြောင်း နားကန်းတတ်ပါတယ်။
( ၇ ) နားကလော်ခြင်း အန္တရာယ်
နားသည် သူ့အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည် – သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးရန်မလို -နားအတွင်းဂွမ်းကို ထိုးထည့်လိုက်လျှင် နားဖာချေးကို အတွင်းသို့ ထိုးထည့်လိုက်သလို
ဖြစ်ပြီး နားအတွင်းသို့ဖိအားဖြစ်စေပြီး အကြားအာရုံကို ဆုတ်ယုတ်စေသည်။
နားဖာချေးများ ကို နားအတွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ပေးပြီး အပြင်ပိုင်းသို့ သဘာဝအလျောက် တဖြည်းဖြည်း ရောက်ရှိလာသည် – အချို့လူများ နားဖာချေးက သာမန်ထက်များသည်
အချို့အသက်ကြီးသူများ နားဖာချေးက ခြောက်သွေ့ပြီး ပုံ မှန်ထက် ပိုမာသည် – နားကလော်သည့် ဂွမ်းတံနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
နားစည်အတွင်းရှိနေသော နားဖာချေးအစုလိုက်ကို နားစည်အတွင်း တွန်းလိုက်မိပါက နားစည် ပျက်စီး၍ နာကျင်ပြီး နားလေးခြင်း ရောဂါပိုးများ ဝင်ရောက်ပြီး နားပြည်ယိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
နားကိုက် နားအူ နားပြည်ယို. နားယား နားရောင်ခြင်းအတွက်
၁ – ကြက်သွန်ဖြူကို ထုချေပြီး အုန်းဆီနဲ့ရော နွေးနွေးလေးအပူပေးပြီး နားအတွင်းသို့အစက်ချထည့်ပေးပါ။
၂ – ရှားစောင်းလပ်ပပ်အတွင်းသားကိုခြစ်ယူပြီး အရည်ညှစ် နာနာ ပြုတ်ပါ ပြုတ်ရည်ကိုနားထဲသို့ အနည်းငယ် ခပ်ပေးခြင်းဖြင့် နားနာ နားကိုက် နားယားခြင်းပျောက်စေသည်။
၃ – ပင်စိမ်းရွက်ကိုညှစ် သတ္ထုရည်ကို ဇွန်းထဲထည့် မီးအပူပေးထားသည့် ခပ်နွေးနွေးကို
၂ စက် ၃ စက်ထည့်ပေးပါက နားအူ. နားကိုက်. နားပြည်ယို ပျောက်သည်။
၄ – ဒန့်ဒလွန်စေ့ကို အမူန့်လုပ် အုန်းဆီနဲ့ရော နားကျပ်ပေးခြင်းဖြင့် နားနာ. နားကိုက် နားပြည်ယို ပျောက်သည်။
၅ – ကင်းပုံရွက်ကိုညှစ်ပြီး ၄င်းသတ္ထုရည်ကို နှမ်းဆီနဲ့ဖျော် နားတွင်းခပ်ပါက နားကိုက်ခြင်းကိုပျောက်စေသည်။
၆ – ဖလံတောင်ဝှေးအခွံခွာ၍ အပူပေးပြီး အရည်ညှစ်ယူ နားထဲသို့ ၂စက် ၃စက်ခန့်ထည့်ပေးပါက နားကိုက် နားအူ နားယာ နားရောင် နားပြည်ယို ပျောက်စေသည်။
၇ – နားလေး. နားအူ. နားလေထွက် နားပြည်ယိုခြင်းအတွက် – ကြောင်လျာမြစ် အမူန့်ကို နှမ်းဆီနဲ့ရော မီးနဲ့ချက် ခပ်နွေးနွေလေးကို နာကျပ်ပေးပါ။
၈ – နားသွေးထွက်ပါက – ကြောင်လျာသီးကိုမီးဖုတ် သံပုရာရည်နဲ့ရော ပွတ်လိမ်းပေးပါ။
၉ – နားလေထွက်ပါက – လူနာစိတ်ြ ကိုက် ကြောင်လျာသီးနုနုကို သံပုရာရည်နဲ့သုပ်ကျွေးပါ။
နားနဲ့ပတျသကျပွီး အပွုလုပျသငျ့သော အရာမြား
နားတှမှော သူ့ဖာသာသနျ့စငျစခွေငျးနဲ့ သူ့ဖာသာ ကာကှယျနိုငျခွငျးဆိုတဲ့ သဘာဝသတ်တိရှိပွီးသားပါ။
နားဖာခြေးက သဘာဝအရ နားကို စှတျစိုပေးသောအရာဖွဈသညျ။
ဒါကွောငျ့ နားတှကေို မမှနျကနျတဲ့နညျးတှနေဲ့ သနျ့ရှငျးဆေးကွောမူ ပွုလုပျတဲ့အခါမှာ နားမှာထိခိုကျ ဒါဏျရာ ရခွငျးနဲ့ နားတှငျးကူးစကျပိုးဝငျခွငျးဆိုတဲ့ပွဿနာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။
နားဖာခြေးတှဟော နားနဲ့သူ့ဖာသာ သနျ့စငျစတေဲ့ လုပျငနျးစဉျကို ကောငျးကောငျးအလုပျ လုပျနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးပါတယျ နားဖာခြေးတှဟော ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပိတျဆို့မနရေငျ ကလျောပွီး မဖယျရှားသငျ့ပါဘူး။
ဒါ့ပွငျ နားဖာခြေးဟာ ဖုနျနဲ့ပိုးမှားတှကေို နားစညျထဲမရောကျအောငျ သယျယူထားပေးပါတယျ၊ အမြားအားဖွငျ့ နားဖားခြေးဟာ သူ့အလိုလို ထှကျသှားလရှေိ့ပါတယျ၊ဒါပမေယျ့
တခြို့လူတှမှောတော့ အလိုလို ထှကျမသှားတဲ့အတှကျ နားဖာခြေးကို ကလျောပွီးဖယျထုတျရတတျပါတယျ။
( ၂ ) နားစညျထဲဘာမှမထညျ့ပါနဲ့
နားအတှငျးထဲကို ဝါဂှမျးစ ကလဈလို ခြှနျတကျတဲ့ အရာတှမေထညျ့ပါနဲ့ နားအတှငျးထဲပွငျပပစ်စညျးထညျ့တာဟာ နားစညျရဲ့နူးညံ့တဲ့ အရပွေားကို ထိခိုကျပကျြဆီးစသေလိုအခနျ့မသငျ့ရငျ နားစညျကို ပေါကျပွဲစပေါတယျ။
လူအမြားစုဟာ နားဖာခြေးထှကျသှားအောငျ နားထဲကိုပွငျပပစ်စညျးထညျ့ပွီး ကလျောထုတျတတျကွပါတယျ နားဖာခြေး သိပျမရှိပဲ ပွငျပပစ်စညျးဟာ နားစညျအထိရောကျသှား
ရငျ နားကို မသကျမသာဖွဈစကော ယာယီနားမကွားတော့တာမြိုး ဖွဈသှားတတျပါတယျ။
နားစညျအရပွေား ခွဈမိခွငျးနဲ့ နားဖာခြေးဟာ နားစညျအတှငျးထဲထိ ရောကျရှိသှားခွငျးတှကွေောငျ့ နားတှငျးကူးစကျပိုးဝငျတဲ့ အန်တရာယျလညျးမြားပါတယျ။
နားတှငျးအပွငျဖကျပိုငျးညဈပတျနရေငျ ဆပျပွာနဲ့ရစေိုစှတျနတေဲ့အဝတျနဲ့ အဝတျစသုံးပွီး ဆေးကွောပေးပါ။ နားအတှငျးထဲကိုတော့ အဝတျစ လကျခြောငျးနဲ့ တခွားဘာမှထညျ့ပွီးတော့မဆေးကွောပါနဲ့။
ကလေးရဲ့နားကို ဆေးကွောသနျ့စငျဆေးပေးခြ ငျရငျလညျး ဝါဂှမျးစကို ဆပျပွာမပါတဲ့ရထေဲထညျ့ပွီး ဆေးကွောပေးလို့ရပါတယျ ဒါပမေဲ့ နားကို ခွောကျသှအေ့ောငျပွနျပွုလုပျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
လူကွီးတှရေောကလေးတှပေါနားထဲ ပွငျပပစ်စညျးဝငျနိုငျပါတယျ။ လူကွီးတှမှောတော့ မတျောတဆ နားကပျကြှတျပွီး နားထဲဝငျသှားတာဖွဈတတျပွီး ကလေးတှကေတော့စခငျြနှောကျခငျြစိတျ စပျစုလိုစိတျနဲ့ အခွားကလေးရဲ့နားထဲ ဒါမှမဟုတျကိုယျ့နားထဲပွငျပပစ်စညျးထညျ့တတျကွပါတယျ။
ပဲစလေို့ ခဲဖကျြလိုပစ်စညျးတှဆေိုရငျ သူ့အလိုလို ပွနျထှကျသှားဖို့ မလှယျပါဘူးအငျးဆကျပိုးမှားတှလေဲ နားထဲရောကျပွီးပိတျမိနတောမြိုး ရှိပါတယျ အဲဒီအခြိနျမှာ
ကိုယျ့ဖာသာပွငျပပစ်စညျးကို ဖယျရှားဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့ ဆရာဝနျထံ ခကျြခွငျးသှားပါ။
ဆရာဝနျက နားထဲက ပွငျပပစ်စညျးကို အထူးကိရိယာနဲ့ ဖယျရှားပေးမယျ့အပွငျ နားထဲမှာ ထိခိုကျဒါဏျရာ ရှိ မရှိ ဆနျးစဈကွညျ့ရူကာ လိုအပျသလို ကုသပေးပါလိမျ့မညျ
နားထဲနားဖာခြေးအလှနျအမငျးပိတျဆို့ နပွေီး ဖယျရှားဖို့လိုတယျ့အခွအေနတှေရှေိပါတယျ ဖယျရှားဖို့လိုတယျ့ လက်ခဏာရပျတှကေတော့ နား အကွားအာရုံ ဆုံးရူံးခွငျး
နားကိုကျခွငျး နားအူခွငျး နားထဲပွညျ့နသေလို ခံစားရခွငျး စတာတှပေဲဖွဈပါတယျ။
( ၆ ) ဝါဂှမျးတံဖွငျ့နားကလျောခွငျးဆိုးကြိုး
ဝါဂှမျးတံကို အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ အသံအိုးလို့ချေါတဲ့ ( Eardrum ) ထိခိုကျနိုငျပွီးမကွာခဏ နားကိုကျတာ နားယောငျရမျးတာ အနာဖွဈပွီး ပွညျတညျတဲ့ အပွငျ အဆိုးဆုံး နားကနျးတဲ့အထိ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
ခဏခဏနားကလျောခွငျးကိုမလုပျပါနဲ့အသံအိုးကိုထိခိုကျစအေကွားအာရုံကိုထိခိုကျစနေားကိုကျတာ နားယောငျယမျးတာ နားအနာကွောငျ့ပွညျတညျတာဖွဈစတေယျ
ဆေးပညာရှငျမြားက ခဏခဏနားကလောစရာမလိုပါကွောငျး နားကနျးတတျပါတယျ။
( ရ ) နားကလျောခွငျး အန်တရာယျ
နားသညျ သူ့အလိုအလြောကျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျသညျ – သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးရနျမလို -နားအတှငျးဂှမျးကို ထိုးထညျ့လိုကျလြှငျ နားဖာခြေးကို အတှငျးသို့ ထိုးထညျ့လိုကျသလို
ဖွဈပွီး နားအတှငျးသို့ဖိအားဖွဈစပွေီး အကွားအာရုံကို ဆုတျယုတျစသေညျ။
အခြို့အသကျကွီးသူမြား နားဖာခြေးက ခွောကျသှပွေီ့း ပုံ မှနျထကျ ပိုမာသညျ – နားကလျောသညျ့ ဂှမျးတံနဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျမညျမဟုတျပါ။
၁ – ကွကျသှနျဖွူကို ထုခပြွေီး အုနျးဆီနဲ့ရော နှေးနှေးလေးအပူပေးပွီး နားအတှငျးသို့အစကျခထြညျ့ပေးပါ။
၂ – ရှားစောငျးလပျပပျအတှငျးသားကိုခွဈယူပွီး အရညျညှဈ နာနာ ပွုတျပါ ပွုတျရညျကိုနားထဲသို့ အနညျးငယျ ခပျပေးခွငျးဖွငျ့ နားနာ နားကိုကျ နားယားခွငျးပြောကျစသေညျ။
၃ – ပငျစိမျးရှကျကိုညှဈ သတ်ထုရညျကို ဇှနျးထဲထညျ့ မီးအပူပေးထားသညျ့ ခပျနှေးနှေးကို
၂ စကျ ၃ စကျထညျ့ပေးပါက နားအူ. နားကိုကျ. နားပွညျယို ပြောကျသညျ။
၄ – ဒနျ့ဒလှနျစကေို့ အမူနျ့လုပျ အုနျးဆီနဲ့ရော နားကပျြပေးခွငျးဖွငျ့ နားနာ. နားကိုကျ နားပွညျယို ပြောကျသညျ။
၅ – ကငျးပုံရှကျကိုညှဈပွီး ၄ငျးသတ်ထုရညျကို နှမျးဆီနဲ့ဖြျော နားတှငျးခပျပါက နားကိုကျခွငျးကိုပြောကျစသေညျ။
၆ – ဖလံတောငျဝှေးအခှံခှာ၍ အပူပေးပွီး အရညျညှဈယူ နားထဲသို့ ၂စကျ ၃စကျခနျ့ထညျ့ပေးပါက နားကိုကျ နားအူ နားယာ နားရောငျ နားပွညျယို ပြောကျစသေညျ။
၇ – နားလေး. နားအူ. နားလထှေကျ နားပွညျယိုခွငျးအတှကျ – ကွောငျလြာမွဈ အမူနျ့ကို နှမျးဆီနဲ့ရော မီးနဲ့ခကျြ ခပျနှေးနှလေေးကို နာကပျြပေးပါ။
၈ – နားသှေးထှကျပါက – ကွောငျလြာသီးကိုမီးဖုတျ သံပုရာရညျနဲ့ရော ပှတျလိမျးပေးပါ။
၉ – နားလထှေကျပါက – လူနာစိတျွ ကိုကျ ကွောငျလြာသီးနုနုကို သံပုရာရညျနဲ့သုပျကြှေးပါ။